सांसद वलीले र वाईसीएल कार्यकर्ता बस्नेतको गालामा किस गरेको तस्विर भाइरल ! कसरी भयो गोप्य फोटो लिक ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सांसद वलीले र वाईसीएल कार्यकर्ता बस्नेतको गालामा किस गरेको तस्विर भाइरल ! कसरी भयो गोप्य फोटो लिक ?
सांसद वलीले र वाईसीएल कार्यकर्ता बस्नेतको गालामा किस गरेको तस्विर भाइरल ! कसरी भयो गोप्य फोटो लिक ?
केहिदिनअघि लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयको म’र्यादा र अनुशासनलाई मिचेर टिकटक बनाउदै नाच्दै गरेको एउटा भिडियो भाइरल बन्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई बिर्सिएर माओवादी कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमै नांचगान गर्दै टिकटकमा मस्त बन्न थालेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उक्त टिकटक काण्ड सेलाउन नपाउदै लुम्बिनी प्रदेशकी एक जना सांसदको अर्को काण्ड बाहिर आएको छ ।
बरालले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवको कार्यकक्षमा नांचेको भिडियो आफ्नो टिकटकमा समेत सेयर गरेकी छन्। उनले सेयर गरेको उक्त भिडियोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लेखिएको स्पष्ट देखिन्छ। सञ्चारकेन्द्र बाट साभार